Ndị na-eweta NJFP Raw (615250-02-7) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọla abụba / IDFP (615250-02-7)
SKU: 615250-02-7. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na ikike mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke IDFP (615250-02-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
IDFP isi agwa:
IDFP (615250-02-7) okirikiri
Aha aha: ISOPROPYL DODECYLFLUOROPHOSPHONATE
IDFP (615250-02-7) Njikere
IDFP bụ otu akụkụ nke organophosphorus nke metụtara ndị na-agwọ ọrịa ahụ sarin. Dị ka sarin, IDFP bụ onye na-enweghị ike igbochi ya maka ọtụtụ enzymes dị iche iche nke na-emekarị ka ọ ghara ịkụda ndị na-ahụ maka ntanet, ọ bụ ezie na ụdị IDFP dị ogologo na-eme ka ọ dị ike dị ka onye na-emechi acetylcholinesterase (AChE), na IC50 nke naanị 6300nM, ọ bụ onye nwere ike inhibitor abụọ enzymes monoacylglycerol lipase (MAGL), bụ isi enzyme nke na-eweda 2-arachidonoylglycerol endocannabinoid (2-AG), na fatty acid amide hydrolase (FAAH), nke bụ isi enzyme nke na-emebi isi isi endocannabinoid anandamide . Ihe IC50 nke IDFP bụ 0.8nM na MAGL, na 3.0nM na FAAH. Mgbochi nke enzymes abụọ a na-eme ka ụbụrụ na-arịwanye elu ma na 2-AG na ụbụrụ, na-eme ka mpempe akwụkwọ cannabinoid nwere ike ịmịpụta na àgwà omume nke anụ ụmụ anụmanụ, ebe ọ na-enweghị ike na AChE, ọ pụtara na e nweghị ihe mgbaàmà cholinergic. ]    N'agbanyeghi usoro ihe yiri nke ya na ndi mmadu ajuju a machibidoro iwu, IDFP a na-eme ka o daa n'ahpuru nkowa nke "chemical substances" n'okpuru Nkwekota Ngwá Agha Chemical,  na ebe ọ bụ na ọ naghị egosiputa ihe egwu AChE nwere ike nke ogige organophosphorus yiri, IDFP anaghị edozi otu iwu ahụ.
Kedu ihe nyocha nke IDFP
Maka nchekwa ogologo oge, anyị na-atụ aro na IDFP ga-echekwa dị ka enye na -20 ℃. Ọ ghaghị ịdịgide ma ọ dịkarịa ala otu afọ.
A na-enye IDFP ka ọ bụrụ ngwọta na methyl acetate. Iji gbanwee ihe mgbaze ahụ, kpochasịa methyl acetate n'okpuru mmiri dị nwayọọ nke nitrogen ma gbakwunye ihe nkwụsị nke ndị na - ahọrọ. Ndị na - emepụta ihe dịka ethanol, DMSO, na dimethyl formamide nwere ike iji gas jupụtara. Solubility nke IDFP na ihe mgbaze ndị a bụ ihe dịka 10mg / ml.
Ọ bụrụ na achọrọ ọgwụ ngwọta maka nyocha nke ndụ, a ga-edozi ha kachasị mma site na ịmegharị ihe na-emepụta ihe n'ime ihe ndị na-edozi ahụ ma ọ bụ saline isotonic.Nọpụta na ihe ndị dị ndụ na-enweghị ihe ọ bụ, ebe ọ bụ na ihe ndị na-emepụta ihe nwere ike inwe mmetụta nrịanrịa na obere ihe. adighi akwado itinye ihe ngwọta nke otutu ihe kariri otu ubochi.
Otú IDFP si arụ ọrụ
IDFP bụ onye inhibitor nke na-apụghị ịgbagha agbagha maka ọtụtụ enzymes dị iche iche nke na-emekarị ka ọ ghara ịkụda ndị na-ahụ maka ntanetrị, ọ bụ ezie na ụdị IDFP dị ogologo na-eme ka ọ ghara ịdị ike dị ka onye na-emechi acetylcholinesterase (AChE), ebe ọ bụ onye na-egbochi enzymes abụọ monoacylglycerol lipase ( MAGL), bụ isi na enzyme nke na-eme ka 2-arachidonoylglycerol endocannabinoid (2-AG), na fatty acid amide hydrolase (FAAH), bụ isi nke enzyme nke na-eme ka ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ isi. Otu akụkụ organophosphorus nke na-ejikarị aka MAGL na FAAH na XXUMX na 50 nM, respectively.0.8 Na 3 mg / kg, IDFP na-ebuli ụbụrụ nke 1-AG na AEA karịa 10, ma belata ọkwa nke arachidonic acid site 2-n'ogige atụrụ.
Ngwaahịa a abụghị maka mmadụ ma ọ bụ ọgwụ ogwu, ịdọ aka ná ntị ọzọ ka na-eme nchọpụta. Zere iso gị na akpụkpọ anụ, anya, akụkụ iku ume, nsogbu ọ bụla, kpọọ dọkịta gị ozugbo.
IDFP (615250-02-7) Ntụ ntụ
IDFP enwere mmetụta ọ bụla
A na-atụle ọgwụ dị nro na nnu na mmiri na nchịkwa ọbara na-adịte aka, nke a na - eme ka ọ bụrụ nke a na - eme ka ọ bụrụ nke a na - eme ka ọ dịkwuo afọ abụọ, ya bụ, cyclooxygenase-2 (COX-2) na fatty acid amide hydrolase (FAAH) . Ngwunye nke anandamide (15, 30, na 60 nmol · min-1 · kg-1) n'ime mkpịsị aka nke C57BL / 6J bụ ụmụ anụmanụ kpaliri diuresis na nnu nnu na COX-2- ma ọ bụghị usoro COX-1. Iji chọpụta ma endocannabinoids endogenous dị na medal medal nwere ike imepụta mmetụta yiri nke ahụ, mmetụta nke isramopodolic dodecyl fluorophosphate (IDFP), nke na-egbochi isi abụọ endocannabinoid hydrolases, a mụrụ. Ngwọta IDFP mere ka ọnụọgụ mmụm nke mmiri na sodium excretion na COX-2- mana ọ bụghị ụdị ego COX-1. Ejighị njehie ma ọ bụ IDFP emetụtare ọnụ ọgụgụ ntinye ntanetị. Ọ bụghị usoro mkpụrụ ndụ (0.625 mg · kg-1 · 30 min-1 iv) ma ọ bụ intramedullary (15 nmol · min-1 · kg-1 · 30 min-1) mmepe nke IDFP n'ihu anandamide intramedullary (15-30 nmol · min-1 · kg-1) nke na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke na-atụ aro na hydrolysis nke anandamide adịghị mkpa maka mmetụta ya diuretic. Ngwunye IDFP na-ejideghị ihe ọ bụla na-emetụta ọbara ọbara ma ọ bụ na-eme ka ọkpụkpụ ọbara na-agbanye mgbatị. Mmetụta nke IDFP maka mmụba nke mmamịrị na ọbara ọbara na-atụgharị uche bụ FAAH na-adabere dị ka egosipụtara na-eji FAAH knockout ụmụ oke. Nyocha nke urery PGE2 concentrations by HPLC-electrospray ionization massem spectrometry gosiri na ọgwụ NJFP belata urinary PGE2 Ihe ndị a na-adabere na ọrụ nke FAAH na endogenous anandamide-eme site na a COX-2-dependent metabolite iji mezie diuresis na nnu excretion na mousekidney.
Esi zụta IDFP ntụ ntụ (615250-02-7) site na AASraw
Ntuziaka Ntuzi NFFP Ntụziaka:
IDFP (615250-02-7): Mmetụta, Ụdị, Nyocha